Android-x86, maitiro ekuiisa pane yependrive yekutenda kune LineageOS | Linux Vakapindwa muropa
Android-x86, maitiro ekuiisa pane yependrive yekutenda kune LineageOS, pamberi peCyanogenMod
pablinux | | Sisitimu Yekutonga
Pasina kupokana, chinokodzera komputa zvakanakisa idesktop inoshanda sisitimu. Bhurawuza uye kunyorera zvakajairika ndizvo zvakanakisa uye zvine simba, asi izvi zvinogona kuve dambudziko kana timu yedu yakangwara. Uye zvakare, Google's mobile operating system inozivikanwa kwazvo uye mairi tinowana mafomu mazhinji ayo anogara achifadza kugona kushandisa. Nechikonzero ichocho, kana kune chero chimwe chinhu chinoitika kwauri, ndinofunga iri zano rakanaka kugara uripo Android-x86.
Kune nzira dzakawanda dzekuisa Android-x86 paPC, asi iyo yekumisikidza haisi iyo inonzwisisika kunze uko uye kuita kuti ishande padanda reUSUS harisi iro basa riri nyore pasi rose. Nekuti ndizvo zvatiri kuzodzidzisa pano, maitiro ekuisa iyo vhezheni yeApple makomputa pane USB iyo yatinogona kushandisa pane chero PC uye hatizobate hard drive.
1 Maitiro ekuisa Android-x86 pane USB
2 GApps anowanikwa, asi hazvisi zvese zvichashanda
Maitiro ekuisa Android-x86 pane USB
Nzira yakanakisa yekuve neApple pane USB ndeye kushandisa LineageOS. Ndiro zita iro chirongwa chakambozivikanwa seCyanogenMod rakagashirwa uye iri zvakare inowanikwa yeRaspberry Pi. Uye nei tichizoshandisa iyi sarudzo kana iri yechinyakare? Zvakanaka, nekuti inopa mukana wekuita otomatiki kuisirwa; isu hatichafanirwa kubata chero zvikamu uye zvese zvichave zvakachengeteka kwazvo. Uye zvakanyanya kukosha: zvinoshanda.
Kuti uise Android-x86 pane pendrive isu tinoda maviri, imwe ye LiveUSB uye imwe yatinoisa iyo system kushanda. Matanho ekutevera angave aya:
Ngatiendei ku Android-x86 peji.
Isu tinodongorera pasi uye tinosarudza yazvino vhezheni inosanganisira mavara "cm", ayo manzwiro anoita kuti tifunge kuti anobva kuCyanogenMod. Ipapo tinosarudza "girazi" uyezve sarudzo. Iwo akajairwa anoshandisa kernel 4.9, uye yekupedzisira, iyo "k419" inoshandisa Linux 4.19.
Tevere tinofanirwa kupisa iyo ISO pane pendrive. Kune izvi tinogona kushandisa Etcher, Rufus (Windows) kana chero imwe jenareta yemabhuti e disc.
Isu tinoisa iyo USB yatinoisa iyo system mune USB chiteshi.
Isu tinotangazve komputa uye tigoigadzira boot kubva kuLiveUSB.
MuGRUB (kutanga) isu tinosarudza iyo sarudzo «Yepamberi sarudzo".
Tevere tinosarudza "LineageOS -version- Auto Kuisa kune Yakatsanangurwa harddisk", uko "vhezheni" ichave iyo vhezheni yeLin LineOS.
Muhwindo rinotevera, tinosarudza kuisirwa USB drive. Ive nekuchenjerera apa, iri idanho rakatsetseka: kana tikasarudza "Harddisk" isu tinopwanya hard disk rePC. Tinofanira kusarudza panoti "Kubviswa" uye "USB DISK". Izvo zvakare zvinobatsira kutarisa saizi yediski.
Inotinyevera kuti isu takasarudza "Auto yekuisa" uye kuti CHESE icho chiri muchikamu ichocho chinobviswa. Tinobaya pana «Hongu».
Tinomirira fomati uye yekunyora basa kuti ipedze. Izvi zvinokurumidza kwazvo.
Mushure mekumisikidzwa, tinogona kusarudza "Run LineageOS". Yakashanda seizvi kwandiri, asi ini handizive kana kuikurudzira. Iwe unogona kusarudza "Reboot" (reboot) uye nekudaro tinova nechokwadi chekuti tinobvisa LiveUSB kuitira kuti itange kubva kuApple.
Chekupedzisira, isu tinotanga kubva kuUSB yatakaisa LineageOS. Pano tichafanirwa kumirira kwenguva yakareba.
Kana tangotanga kubva kuUSB, iyo yekuisa wizard ichatanga. Izvi pasina kurasikirwa. Iko kuzadza muminda kusarudza mutauro, batanidza kune netiweki yeWiFi, kana tichida kushandisa account yedu yeGoogle, nezvimwe. Paunenge uchinge uri mukati, inokurudzirwa Launcher ndiyo ine LineageOS logo, ndokuti, "Trebuchet Launcher".
GApps anowanikwa, asi hazvisi zvese zvichashanda
Ramba uchifunga kuti Google haitsigire iyo desktop desktop yeApple. LineageOS hongu isu inobvumira kushandisa GApps (Google services) pane yako Android-x86, asi kune maapplication asingagone kushandiswa pane izvo zvivakwa. Semuenzaniso, Kodi haina kuvandudza vhezheni yayo yeApple-x4 kwemakore mana, saka hazvishande kana tikazvitora kubva kuchitoro cheapp. Izvo zvinokwanisika kutsvaga vhezheni yakanyorwa nemumwe mushandisi, asi harisi basa riri nyore.
Kune zvese zvimwe zvinhu, zvinoshamisa kuti inofamba zvakasununguka, saka zvakakodzera kuyedza. Iwe hauzomboziva kuti isu tichazoda rinhi rinongowanikwa chete paApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Android-x86, maitiro ekuiisa pane yependrive yekutenda kune LineageOS, pamberi peCyanogenMod
Iyo Raspberry Pi 4-yakavakirwa CutiePi yave kuwanikwa pre-odha ye $ 199
Rumwe rutivi rwemari, vateveri vaStallman vanoshevedza FSF kuti irambe kumanikidzwa